China Rakagadzika rimwe chete dhirowa yekurara husiku padivi kabhinari # 0122 Kugadzira uye Fekitori | Yamazonhome
Rakareruka rimwe chete dhirowa yekurara husiku padivi kabhineti # 0122
Muenzaniso nhamba: Amac-0122
Kukura: 350mm * 500 * 580mm
Dhirowa rimwe chete rekuchengetedza tafura yemubhedha
Zvese zvakasarudzwa zvemhando yepamusoro zvakatipoteredza zvine hushamwari huni hwakasimba, hwakasimba uye hwakakora, hwakagadzikana uye hunogara, zvinhu zvechokwadi pamutengo wakaringana, uye uzere nezvinhu. Iyo yepamusoro kabati yakawedzeredzwa uye yakasimbiswa, yakatsetseka uye isina kusimba, iri nyore kuchenesa. White oak anorwira akananga, asingatyi rubhabhatidzo rwemakore. Zvinoenderana nematanho epasi rose e "anti-kutsemuka uye anti-deformation", isu tinosarudza chena oak inotengeswa kubva kuNorth America, usasanganisa chero bhodhi, kwete shoddy, uye ramba kupenda. Ingoita midziyo yakakodzera vanhuwo zvavo.
Multi-layer chengetedzo yakasimba yehuni padivi kabhineti
Iyo yakawanda-nhanho nzvimbo yekuchengetera iri yega yakavanzika uye yakavhurika. Iko kusanganiswa kwenzvimbo yakavhurika uye dhirowa yakavharwa kunovimbisa mamiriro ehukuru hukuru uye zvakare inosangana zvakasiyana zvidikanwi zvevanhu vakasiyana. Tafura yese yemubhedha inotora iyo yakatwasuka marongero ezvese nehuni zvinhu, izvo zvinongogonesa kuwirirana kwezviyo zvehuni, asi zvakare zvinoderedza kutsemuka kusvika padanho rakakura, unova muyedzo wekushanda uye zvinhu zvinopedza nguva.
Yakasarudzwa North America yepamusoro-chena oak
Dhirowa repamusoro rinogona kuvharwa kuisa zvimwe zvinhu zvemunhu, dhayari manotsi, zvitupa magwaro, nezvimwe. Iyo yakavhurika kamuri pazasi repasi inogona kubata zvekuverenga, nharembozha, IPAD, nezvimwe usati warara kudzivirira guruva. Nzvimbo yepamusoro yepamusoro inogona kuiswa pameso uye nezvimwe zvinhu zvemunhu.
Iko hakuna kupokana kwekudhonza iyo yakasimba huni njanji groove
Solid huni inotsvedza njanji, yakanyarara kusunda uye kudhonza, kumeso uye hapana kuramba, dzivisa dambudziko rengura, rakasimba Iyo yakasimba huni paburi mubato uri nyore uye wakanaka, uye yakadzamidzirwa paburi tekinoroji inochengetedza nzvimbo uye inonzwa kugadzikana. Iyo groove upamhi inokodzera hupamhi hwemunwe wemunhu, uye zviri nyore kuvhura nekuvhara.
Hushamwari uye hwevanhu 45 degree rakakombama kabati rekona
Iyo 45-degree arc tafura yekona yakakwenenzverwa kakawanda kuti iitenderedze uye inotsvedzerera kudzivirira mapundu. Kuratidza nokusaziva, kutarisa kumashure zvishoma, inogona kunge iri nguva iyo iwe yawakafanirwa kusangana newe. Hapana chikonzero chekuomeswa nemaune, dzokera kuchinangwa chekutanga uye kurerutsa kuomarara.
Bold kabati makumbo anosanganisa fashoni uye zvakasikwa
Makona akapoteredzwa emakesi makabati akasimba akasanganiswa neyakagadzirwa nendarira zvinoita kuti iwedzere kugadzirwa uye kugadzikana. Iko kusanganiswa kwemafashoni uye zvakasikwa zvinoratidzwa mune zvisina kujairika ruzivo. Zvinoreva zvakasikwa pasina shanduko, ichichengeta zvisaririra zvematanda echisikigo, iwo maratidziro akaomeswa uye akajeka, akapusa uye echisikigo.
Pashure: Grooved mubato wakapetwa kaviri-kudhirowa pamubhedha kabati solid huni parutivi kabati # 0121
Solid Wood Yakakwira uye Yakadzika Bar Chitsiko Cafe Chigaro S ...
Modern Minimalist White Oak Solid Wood Kofi T ...
Multifunctional Yehuku Kuchengeta Imba Nyore S ...
Premium Imbwa Imba Solid Wood Mubhedha wePet